Ihe ị ga-ahụ na obodo Prague (M) | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na obodo Prague (I)
Susana Garcia | | Obodo, Prague
Prague bụ obodo Europe nke nwere ọtụtụ amara, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị agaa akụkụ ochie ya. A maara ya nke ọma maka nnukwu ụlọ ya na Charles Bridge a ma ama, mana eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, site na etiti etiti ruo agbata jupụtara na akụkọ ntolite, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na operas. Taa, anyị ga-enyocha ihe ebe dị mkpa nke obodo Prague.
Ọ bụrụ na ị gaa obodo Prague ezumike ị ga-ahụ onwe gị na a obodo nwere ezigbo European, na ochie ụlọ na-ahụkarị ije. A ga-enwe ọtụtụ ihe ga-adọrọ uche gị na ọtụtụ isi na ihe ncheta iji gaa, yabụ dee ndepụta kachasị mkpa ma echefula ihe ọ bụla.
1 Castlọ Prague
2 Àkwà mmiri Carlos
3 Obodo ochie
4 Obodo Ndị Juu
5 Ogige Wenceslas
6 Terezín, ogige ịta ahụhụ ochie
Prague Castle abụghị otu ụlọ dị ka anyị nwere ike iche n’echiche, mana ọ bụ ụlọ elu nke ụlọ kasị ukwuu n'ụwa. Ọ nwere ogige, ụlọ ụka, Katidral nke San Vito nke anyị ga-ekwu maka emesịa, ogige obibi na ụlọ ọrụ nhazi. Ezubere ụlọ a na narị afọ nke XNUMX ma jee ozi dị ka ebe obibi maka ndị eze na mgbe emesịrị ndị isi.
N'ime nnukwu ogige a ị nwere ike ịhụ ebe ndị na-adọrọ mmasị, dị ka Callejón del Oro, nke bụbu okporo ámá nke ndị na-edozi ọla edo na nke nwere ụlọ mara mma ugbu a. Enwekwara ọtụtụ ụlọ elu, dịka White Tower ma ọ bụ Powder Tower. Oge eleta na-abụkarị site na 6: 00 ka 23: 00 pm, ọ bụ ezie na ihe ncheta nwere ike ịnwe oge dị mkpirikpi. Ọnụahịa ahụ ga-adabere n'ụzọ anyị na-aga. N’ezie anyị ga-achọ ogologo oge iji hụ ebe kacha mkpa n’obí a.
Àkwà mmiri Carlos
Charles Bridge bụ otu n'ime ihe oyiyi kachasị akara ngosi nke Prague ma na-akọrọ. Nke a na - ejikọ obodo ochie na obodo pere mpe ma ọ bụ Malá Strana. O doro anya na ọ bụ ebe kachasị njem na ebe anyị na-enweghị ike ịgafe na-enweghị ịse foto ole na ole. Ewu ya bidoro na narị afọ nke iri na anọ, mana ọ gaghị abụ na narị afọ nke 30 ka ha ga-arụcha ya. Na mgbakwunye, o nwere ihe oyiyi 1393 nke ndị nsọ, nke ejiri nwayọọ nwayọọ gbakwunye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe ịchọrọ, chọọ ihe oyiyi nke Saint John nke Nepomuk, nke mbụ a ga-atụkwasị, nke a tụbara n'ime osimiri ahụ na XNUMX site na iwu nke Wenceslao V. Ọ bụrụ na ị tinye aka gị na onyinyo nke okwukwe ya ma mee ka ochicho ahu, odi ka inye gi ya.
Obodo ochie abụwo ebe etiti ndụ ọha na eze na obodo ebe ọ bụ na Middle Ages, ma taa ọ ka dị ezigbo mkpa na njem nleta. N'ime ya ị nwere ike ịhụ ọmarịcha okporo ụzọ, ọmarịcha ụlọ na ụlọ ochie yana ndị omenkà n'okporo ámá. Kacha Central ebe doro anya na Obodo Ochie Town, ebe enwere ụlọ oriri na ọesụ cafụ na ụlọ kọfị iji nọrọ na-atọ ụtọ ikuku nke obodo. Na mpaghara a anyị nwere ike ịhụ Churchka nke Nwanyị Anyị nke Týn n'ụdị Gothic, Halllọ Nzukọ Obodo ma ọ bụ Towerlọ Elu Elekere. Buildingslọ ochie, ndị a na-elekọta nke ọma ma nwee ọmarịcha agba, mara ezigbo mma.
Obodo Ndị Juu
Josefov bụ aha ndị Juu Nkeji Iri, onye mbido ya malitere site na Middle Ages. N’akụkụ a nke obodo ahụ nwere ụlọ nzukọ, mana n’enweghị obi abụọ, onye nnọchi anya kachasị na nleta ị kwesịrị ime bụ ebe a na-eli ndị Juu, nanị ebe enyere ya ohere ili ndị Juu obodo ahụ. Emepụtara ya na narị afọ nke XNUMX ma ọ dị ka oge agafebeghị. Otu ebe nke bụbu akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke obodo ahụ, nke ahụ dịkwa egwu. Tiketi nwere ike zụrụ n'ụlọ nzukọ ndị agbata obi.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere akụkọ ihe mere eme nke obodo ndị Juu, ndị Inklọ nzukọ Pinkas Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa, na n'elu mgbidi ya ka edere aha ndị Juu ndị ndị Nazi gburu n'oge Oké Mgbukpọ ahụ, yana nchịkọta nke ụfọdụ eserese nke ụmụ ogige ịta ahụhụ Terezín mere.
Wenceslas Square bụ ebe etiti na akụkọ ihe mere eme ebe ụfọdụ ihe mere dịka mmalite nke Velvet Revolution, mana eziokwu bụ na ọ bụ ebe dị ka nnukwu ụzọ. N'ebe a enwere ụlọ ahịa ejiji, ụlọ nri na ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, yabụ na ọ ghọọla ohere ezumike. Ọ naghị adọrọ mmasị karịsịa, mana ọ bụ mpaghara ị ga-eleta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụ ahịa.
Terezín, ogige ịta ahụhụ ochie
Terezín bụ obodo dị iri kilomita isii na otu site na Prague, yabụ anyị ga-ewe otu ụbọchị iji gaa leta Ogige ịta ahụhụ Theresienstadt. O nwere nnukwu ebe ewusiri ike, nke bụ ghetto ndị Juu, na obere, ogige ịta ahụhụ n'onwe ya. Ọ bụ ezie na ebe a abụghị ogige mkpochapụ dị ka Auschwitz, ọ na-ajụ oyi ileta ebe ahụ. Na mgbakwunye, enweghị nnukwu nnabata, yabụ nleta ahụ ga-abụ sọpụrụ karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Ihe ị ga-ahụ na obodo Prague (I)
Cape Verde Ememe
Barranquilla, obodo nke kacha mma na Colombia